Alejandra Pizarnik: mkpịsị odee mara mma n'azụ Akara na ndo gị | Akwụkwọ ugbu a
John Ortiz | | Akụkọ ndụ, Akwụkwọ, Abụọ
Okwu sitere na Alejandra Pizarnik
N'ime afọ iri ise gara aga, Alejandra Pizarnik abụrụla onye na -agụ uri Argentine na -agụkarị na Latin America na ụwa. Ụdị ya pụrụ iche na -enweghị atụ gafere n'oge, gafere ọnwụ ọjọọ ya. Onye ode akwụkwọ ahụ mepụtara okwu uri mbụ, nke ejiri asụsụ bara ụba mara yana ikpuchi isiokwu dị mgbagwoju anya maka oge ya.
N'agbanyeghị na ndụ ya dị mkpụmkpụ —Ọ nwụrụ mgbe ọ dị naanị afọ 36-, jisiri ike rụọ ọrụ siri ike wee hapụ ihe nketa dị oke mkpa. Site na post mbụ gị, Ala kachasị ọbịa (1955), Pizarnik meriri ọtụtụ puku ndị na -agụ akwụkwọ, ndị nọgidere na -ekwesị ntụkwasị obi ruo n'akwụkwọ ikpeazụ ya na ndụ: Obere egwu (1978). N'etiti ndịiche ọ nwetara, ihe nrite abụ abụ obodo (1965) pụtara ìhè.
1 Akwụkwọ ndị Alejandra Pizarnik dere
1.1 Ihe ịrịba ama na ndò gị (1955)
1.2 Oge ikpeazu (1956)
1.3 Osisi Diana (1962)
1.4 Ọrụ na abalị (1965)
1.5 Ọnụọgụgụ Ọbara (1971)
2.3 Afọ ya na Paris
2.4 Ihe owuwu
2.5 Obi erughị ala
2.7 Arụ ọrụ Alejandra Pizarnik
Akwụkwọ ndị Alejandra Pizarnik dere
Ihe ịrịba ama na ndò gị (1955)
Ọ bụ nchịkọta abụ nke abụọ nke Pizarnik bipụtara. Ọ bụ nchịkọta isii n'ime abụ kacha mma o dere ruo taa. Ihe ndị a na -egosi ike na nkwalite nke onye na -ede akwụkwọ na -eto eto; amara n'ime amaokwu ndị ahụ na -enweghị nchekasị, ejighị n'aka, obi abụọ na ọtụtụ ajụjụ.
Otu n'ime abụ anyị nwere ike ịnụ ụtọ na akụkọ ifo a bụ:
“Ebe jupụtara m n'ụgbọ mmiri ọcha.
Ọ na -ewute m nke ukwuu.
M niile n'okpuru reminiscences nke
Achọrọ m ibibi itchiness nke gị
Achọrọ m ka m ghara izu ike nke gị
Gini mere ọhụhụ mmụọ gị ji agba iko
awa ndị a? "
Ịdị ọcha ikpeazụ (1956)
Ọ bụ nchịkọta nke atọ onye ode akwụkwọ wepụtara. Ọrụ ahụ nwere ihe iri na isii ịhụnanya mejupụtara. Ọzọ enwere nkọwa ngosi nke ndụ Pizarnik n'onwe ya, na enwere mgbanwe pụtara ìhè gbasara ọrụ ndị mbụ ya. Ọzọkwa, mkpokọta a nwere uri ụmụ nwanyị dị mkpa site n'oge ahụ. N'etiti poems pụtara:
"Ọ ga -agbawa agwaetiti ncheta.
Ndụ ga -abụ naanị ihe ekwurekwu.
maka ụbọchị enweghị nloghachi.
nnukwu anụ mmiri nke ụgbọ mmiri ahụ ga -ebibi osimiri
na ifufe ihe omimi.
leta amaghị ama ga -achọta aka mkpụrụ obi ”.
Osisi Diana (1962)
N'ime akwụkwọ a, Pizarnik na -enye abụ 38 dị mkpirikpi nwere amaokwu efu. Ọrụ ahụ Ọ bụ Nobel Prize for literature Octavio Paz butere ya. Na emume a, isiokwu dịka ọnwụ, owu ọmụma na iru uju pụtara. Dịka ọ dị na nkeji nkeji gara aga, ahịrị uri ọ bụla na -ekpughere nkọwa nke onye dere ya, dị ka enweghị mmetụta uche na nke mmụọ. E nwere amaokwu ndị nwere ike na -emegiderịta onwe ha.
Ebube ndị mbụ na akụkọ ifo bụ:
"Emere m ka m si na m daa n'ụtụtụ.
Ahapụla m ahụ m n'akụkụ ọkụ
na abụwo m ihe mwute nke ihe a mụrụ ”.
“Ndị a bụ nsụgharị ọ na -atụpụtara anyị:
oghere, mgbidi na -ama jijiji… ”.
ọrụ na abalị (1965)
Nke ahụ bụ nchịkọta abụ 47 nwere isiokwu dị iche iche. Oge, ọnwụ, agụụ na ihe mgbu so na ndị na -akwado ya. Ọ bụ otu n'ime ọrụ dị mgbagwoju anya nke onye edemede Argentine, yana nke ahụ na -egosi ike agwa ya ọzọ. N'ajụjụ ọnụ ya na Marta Isabel Moia, Pizarnik kwuru, sị: “Akwụkwọ ahụ nyere m obi ụtọ nke ịchọta nnwere onwe ide ihe. Enwere m onwe m, ọ bụ m nwe ya ime onwe m ụdị m chọrọ ”.
Nlele nke nchịkọta abụ a bụ:
"Onye na -enwu"
"Mgbe ị na -ele m anya
anya m bụ igodo,
Mgbidi ahụ nwere ihe nzuzo,
okwu egwu m, uri.
Naanị gị na -eme ncheta m
onye njem nwere mmasị,
ọkụ na -adịghị akwụsị akwụsị ”.
Ọbara ọbara (1971)
Ọ bụ ihe akụkọ dị mkpirikpi gbasara Countess Erzsébet Báthory, nwanyị jọgburu onwe ya na obi mgbawa, onye mere mpụ dị egwu ka ọ bụrụ nwata. N'isiakwụkwọ iri na abụọ, a na -eji nke nta nke nta akọwa ụzọ ịta ahụhụ nwanyị a. Akwụkwọ ahụ nwere peeji iri isii nwere ihe atụ Santiago Carusola ma gụnye iberibe nke abụ uri n'ụdị kacha mma nke Pizarnik.
Onye aristocrat onye Hungary bụ Erzsébet Báthory lụrụ Count Ferenc Nádasdy mgbe ọ dị afọ 15. Afọ iri atọ ka e mesịrị, nwoke ahụ nwụrụ. Mgbe ahụ, Countess dị afọ 44 ma na -atụ ụjọ ịka nka. Iji gbochie isi awọ agaghị abịaru gị nso, malite na amoosu, werena mee ememe nke ọ na -eji ọbara ụmụ agbọghọ iji nọgide na -adị ọhụrụ. Dị ka ihe edeturu achọtara n'ime ụlọ ya, ọ tara ahụhụ ma gbuo ihe karịrị ụmụ nwanyị 600 n'ụzọ dị iche iche.
Onye na -ede uri Flora Alejandra Pizarnik mụrụ na Eprel 29, 1936 na Buenos Aires, Argentina. O sitere n'ezinụlọ ndị kwabatara n'etiti ndị Russia, bụ ndị nwere aha nna Pozharnik ma tufuo ya mgbe ọ bi na mba Barça. Site na nwata ọ mara ihe nke ukwuu, n'agbanyeghị na ọ makwa Ihe e ji mara ya bụ inwe ọtụtụ enweghị ntụkwasị obi n'ihi ọdịdị ahụ ya na nsụ ya.
Mgbe m gụsịrị ụlọ akwụkwọ sekọndrị, na 1954 ọ banyere Mahadum Buenos Aires, ọkachasị ngalaba nke Nkà Ihe Ọmụma na Akwụkwọ Ozi. Mana, n'oge na -adịghị anya - jikọtara ya na ụdị onye ọ na -agbanwe agbanwe - ọ gbanwere ọrụ ọrụ nta akụkọ. Ka oge na -aga, ya na onye na -ese ihe bụ Juan Batlle Planas malitere klaasị nka, n'agbanyeghị na o mechara hapụ ihe niile ka o nyefee onwe ya naanị ide ihe.
N'oge mahadum ya, ọ malitere ọgwụgwọ ya na León Ostrov. N'ime ime nke a, ọ nwara ịchịkwa oke iwe ya ma melite ùgwù onwe ya. Nzukọ ndị ahụ bụ ihe kacha mkpa maka ndụ ya na ọbụna maka uri ya, ebe ọ gbakwunyere n'ọrụ ya nke na -ahụ maka amaghị ihe ọ bụla na isi okwu. "Edemede", otu n'ime abụ ya ndị ama ama, raara nye onye na -ahụ maka mmụọ ya.
Afọ ya na Paris
Na mbido 60, Pizarnik biri na Paris afọ anọ.. N'oge ahụ ọ na -arụ ọrụ na magazin Akwụkwọ ndekọ, kwa Ọ mepụtara dịka onye nkatọ na onye ntụgharị okwu. N'ebe ahụ ọ gara n'ihu na ọzụzụ agụmakwụkwọ ya mgbe ọ banyere na Mahadum Sorbonne, ebe ọ mụrụ Akụkọ banyere Okpukpe na Akwụkwọ French. N'ala ndị Paris, ọ zụlitekwara ezigbo ndị enyi, nke Julio Cortázar na Octavio Paz pụtara.
E bipụtara akwụkwọ mbụ ya n'etiti afọ 50 ma aha ya bu aha ya Ala kachasị ọbịa (1955). Mana ọ bụ ruo mgbe ọ lọtara na Paris ka o gosipụtara ọrụ nnọchi anya ya nke ukwuu - yana ahụmịhe uri ka ukwuu, na -egosi ụdị ike ya, egwuregwu ya na ihe okike ya. N'etiti abụ 7 ya pụtara ìhè: Osisi Diana (1962), ọrụ na abalị (1965) na Mwepụ nke nkume ara (1968).
Pizarnik banyekwara n'ụdị akụkọ, yana obere akụkọ Ọbara ọbara (1971). Mgbe ọ nwụsịrị, e bipụtala ọtụtụ akwụkwọ nwụrụ anwụ, dịka: Ọchịchọ maka okwu (1985), Ederede Sobra na abụ ndị kacha ọhụrụ (1982) na Abụ uri (2000). A chịkọtara akwụkwọ ozi ya na ihe ndetu ya Mmekọrịta Pizarnik (1998) na Diaries (2003).
Site na nwata Pizarnik nwere nkụda mmụọ, yana oke nchekasị na mgbagwoju anya, nsogbu ndị na -apụta na abụ ya. Tụkwasị na nke a, o zobere ihe nzuzo mmasị mmekọahụ gị; ọtụtụ na -ebo ebubo na ọ bụ nwoke idina ụdị onwe nakwa na izo eziokwu ya metụtakwara ya nke ukwuu. Onye na -ede uri na -agwọ ọrịa ya na ọgwụ dị iche iche nke riri ya ahụ.
Nkọwa ọzọ nke metụtara ndụ ya n'ụzọ na -adịghị mma ma mebie ya bụ ọnwụ mberede nke nna ya., nke mere na 1967. N'ihi ọdachi ahụ, abụ na akwụkwọ edetu ya bịara nwekwuo nkụda mmụọ, na -ede ihe dị ka: “Ọnwụ na -adịghị agwụ agwụ, nchefu asụsụ na mfu ihe onyonyo. Ọ ga -amasị m ka m pụọ na ara na ọnwụ (…) Ọnwụ nna m mere ọnwụ m ka ọ dị adị ”.
Na 1972, Pizarnik nabatara n'ụlọ ọgwụ mgbaka na Buenos Aires n'ihi oke ịda mba. Na Septemba 25 - mgbe m nọ ezumike ezumike izu ụka -, onye na -ede uri riri ọtụtụ mkpụrụ ọgwụ Seconal wee gabiga ókè nke butere ọnwụ ya. N'elu bọọdụ n'ime ụlọ ya ka ihe ga -abụ amaokwu ikpeazụ ya dị:
"Achọghị m ịga
ọ dịghị ihe ọzọ
na n'okpuru. "
Arụ ọrụ Alejandra Pizarnik
Ala kachasị ọbịa (1955)
Ihe omume ndị furu efu (1958)
Mwepụ nke nkume ara (1968)
Aha na onu ogugu (1969)
Nwee n'etiti lilac (1969)
Ọkụ ọkụ mmụọ (1971)
Obere egwu (1971)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akụkọ ndụ » Alexandra Pizarnik